Ihe mara Mgbe akwọ ụgbọala na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Ihe mara Mgbe akwọ ụgbọala na Europe
Na narị nke mere ihe akụkọ na-adọrọ mmasị na oké echiche na mbio anyanwụ susuru coastlines ka cavernous ugwu, Europe n'ezie nwere ya niile. Ọ bụ nke zuru okè ebe maka a ụzọ njem, dị ka ọ bụ omume na-eme ka ụzọ gị site na otu mba banye mba ọzọ na a okwu nke awa. Ọ bụkwa otu n'ime ndị kasị dịrị nchebe ebe na ụwa na-eme njem. N'agbanyeghị ozi ọma na EU na-adịbeghị anya na-emeghị belata ize ndụ ịnya ụgbọ etoju, nkezi ọnwụ ọnụego bụ ka ndị kasị ala na ọ na-ebi kemgbe (1 na 49 nde).
Ọ bụ uru na-arịba ama na e nwere ndị ụfọdụ na atumatu na ihe mgbochi na ebe banyere mgbazinye ụgbọala na na onye ọ bụla na obodo nwere ya set nke pụrụ iche iwu. Ihe ọ bụ n'ụzọ zuru okè na-anabata n'otu mba (na-akwọ ụgbọala na-enweghị a ịgba ọsọ na Autobahn na Germany, ọmụmaatụ) nwere ike ịbụ na ihe ọzọ, ya mere, ọ na-akwụ ịghọta iwu nke ụzọ dị ka ị na-eme ka ụzọ gị site na Afrika.
N'iburu nke a n'uche, anyị kwadebere ụfọdụ kemfe Atụmatụ inyere gị aka ịnọgide mma ma naanị n'ime iwu n'oge gị ọzọ European ụzọ njem:
1) Amụma mkpuchi gị Vehicle
Ọ dị oké mkpa na unu nwere mkpuchi na mmebi cover mgbe ụgbọala na Europe. Ọ bụrụ na ị na-ewere na gị onwe gị ụgbọala, ị ga-mkpa kpọtụrụ gị insurance ụlọ ọrụ ka ndokwa a. Insurance na-emekarị bolted na gị nkwekọrịta mgbe ị iku a ụgbọ ala, nke na-eme ihe ubé mfe.
2) Weta mapụtara iko Na kọntaktị anya
Ị maara na ọ bụrụ na ị chọrọ ka na-eyi ọgwụ anya m mgbe ụgbọala a hire ụgbọ ala site na Spain, ị na- chọrọ na-ebu a abụọ ụzọ na gị mgbe niile? Mba ndị ọzọ na ndị na-erughị ike banyere nke a, ma ọ bụ ihe ọma na-eme na-ebu a abụọ ụzọ anya wear na gị mgbe niile, iji hụ na ị maara nke niile mbibi n'oge njem gị ga gị isi anya wear ezumike ma ọ bụ na-furu efu.
3) O doro anya na Zere mmanya na Driving
Ezie na nke a nwere ike iyi ka ihe doro anya na nkwupụta, ị nwere ike ha amaghị na mba ụfọdụ nwere a efu ndidi anọru ọṅụṅụ ọkwọ ụgbọala. Nke a pụtara na ọkwọ ụgbọala na-adịghị ekwe ka ihe ọ bụla mmanya na ọbara ha ra, bú nke. The European Commission awade ndụmọdụ na ọkọlọtọ ọbara mmanya ókè maka ọ bụla na mba. na Cyprus, ọ bụ ọbụna megide iwu ka aṅụ a adụ ọṅụṅụ mgbe ụgbọala. Nke a nwere ike iyi ihe siri ike, ma ọ dị mkpa na-akwanyere ndị iwu nke mba na ị gaa zere ihe ọ bụla na-atụghị anya Iwu.
4) Ụgbọala Iji The Right Ma ọ bụ Left
Ma e wezụga n'ihi na United Alaeze, Ireland, na Malta, niile na mba Europe ụgbọala na aka nri n'akụkụ okporo ụzọ. N'ihi na UK bi, a nwere ike ime ka eduzi ka negotiating a Roundabout na a counter malite direction nnọọ tricky, mere na ọ bụ uru na-ewere oge ịgbanwe. Ọkwọ ụgbọala mgbe niile kwesịrị arapara nri ma zere anọ na center Lanes nke okporo ụzọ ha na-ezute. mgbe chụkwute, -echeta mgbe niile na-elele gị n'azụ na-ele mirror nwekwara.
5) Ahịhịa Up On Your Road ịrịba ama
Ịghọta European ụzọ ịrịba ama ga-enyere gị aka iru gị ebe n'enweghị ihe na-ga-enyere gị aka izere breaching iwu. kasị European ebe iji ọkọlọtọ signage nke ezi uche dị onwe nkọwa, ma obere iche iche na font ma ọ bụ na agba na-emegharị. Tupu ha amalite njem, you might want to familiarize yourself with the aghụghọ dị iche iche na ụzọ signage ofụri Europe. Mgbe nke kasị nta, ọ pụrụ inye aka iji gbochie ọgba aghara, na na ọtụtụ, ọ pụrụ ịzọpụta ndụ gị.
6) Ịghọta Olee Toll Collections Work
Mba dị iche iche nwere dị iche iche kpara udu na ụzọ nke ọnụ ọgụgụ collection. na France, ọmụmaatụ, ọ bụ ka na-anabata na-akwụ ụgwọ na ego na-egbu ọnụ ụzọ ámá. Ndị ọzọ na mpaghara ga achọ iji gosipụta a ihennyapade na ala ụgbọ ala gị ka a mata na ị kwụrụ iji ụfọdụ okporo ụzọ. Familiarizing onwe gị na otú tolls na-arụ ọrụ na onye ọ bụla nke gị bu n'obi na-aga ga-enyere gị aka izere ihe ọ bụla penalties.
7) Were The Train Kama Of Driving
Ọfọn ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie ka na-enwe gị na njem, ahapụ hassle nke ịnya ụgbọ, na dị nnọọ na ụgbọ okporo ígwè na Europe, na mmadụ nile nọ Afrika jiri ụgbọ okporo ígwè, na n'adịghị ka ndị ọzọ ebe n'ụwa, ọ bụ nnọọ mfe ịzụta gbaa ụgbọ okporo ígwè online na saịtị dị ka Save A Train, na ị na-ịga hụ ọdịdị n'achọghị ukwuu.
Njikere na-enwe Europe? weather ị họrọ na-akwọ ụgbọala ma ọ bụ ụgbọ okporo ígwè, echeta anyị na Save A Train!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “Ihe mara mgbe ụgbọala na Europe” na na gị na saịtị? ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url =https://www.saveatrain.com/blog/things-to-know-when-driving-in-europe/ ‎– (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#ịnya ụgbọ okporo ígwè ụgbọ oloko Train Travel
I work as a part time tour guide in Kent and blogs about the experience. Her favorite weekend activity is a walking tour in South West Coast of Bristol. She is also a strong advocate of sustainable lifestyle, and hopes to write a book about it someday. She lives with her parents and her Frenchie named Coco - Ị nwere ike pịa ebe a iji ịkpọtụrụ m